Bokashi Myanmar – Bokashi Myanmar
Author Archives: Bokashi Myanmar
Effective Microorganisms (EM) ပါဝင်တဲ့ အကျိုးပြုအနုဇီဝလေးတွေပါဝင်ပြီးပျိုးယူထားတဲ့ ဖွဲနုအချဉ်တမျိုးပါ။အီးအမ်ဆိုတာက လူ၊ သစ်ပင်၊ တောတောင် ရေမြေ နဲ့ လေ စတဲ့ သဘာဝထဲက လူနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အပါအဝင် မြေသားစတာတွေကို ကောင်းကျိုးပြုတဲ့ မျက်စိနဲ့ မမြင်ရလောက်အောင် သေးငယ်တဲ့ အကျိုးပြု ပိုးကလေးတွေပါ။ ဂေဟဗေဒနဲ့လည်းသဟဇာတဖြစ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို တစုံတရာ ညစ်ညမ်းစေမှုမဖြစ်စေတဲ့အပြင် အရည်အသွေးပိုမိုးတိုးတက်အောင်ပါ ပွားများပြုပြက်ပေးတတ်တဲ့ သက်ရှိအနုဇီဝလေးတွေမို့ အခုဆို နိုင်ငံပေါင်း တရာကျော်မှာ အသုံးပြုနေကြပါပြီ။ Bokashi ဒါမှမဟုတ် Effective Microorganism ဒါမှမဟုတ် EM Bokashi လို့ Google တို့ Youtube တို့မှာ ရိုက်ရှာလိုက်ရင်လဲ အများအပြားကို တွေ့ရမှာပါ။ နိုင်ငံအသီးသီးမှာ အသုံးပြုနေကြတာမို့ပါ။ EM research OrganizationContinue reading “Bokashi Bran ဆိုတာ ဘာပါလဲ။”
Posted byBokashi Myanmar June 19, 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on Bokashi Bran ဆိုတာ ဘာပါလဲ။
Read our previous updates here! Happy New Year! It’s Thingyan! Here in Myanmar, it is the end of the year. This week we startafresh, new one — afterafew days of water-soaked madness on every street in every town. It’s fun, and happy, and so totally liberating! And it’s alsoayearContinue reading “Time to scale up!”
Posted byBokashi Myanmar April 14, 2019 April 28, 2019 Posted inOur story, Uncategorized1 Comment on Time to scale up!